Waa maxay calaamadeynta sidee se u soo nooleyn kartaa dhaqaalaha – Tokenization Somalia
Tokenization wuxuu ganacsigaaga ku xirayaa tiknoolajiyada xannibaadda iyo soo saarista astaamahaaga ganacsi, kuwaas oo mabda 'ahaan ula mid ah saamiyada.
Markaad ku xidho xannibaadda, waxaad tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ugu samayn kartaa dhammaan howlaha ganacsigaaga. Isla mar ahaantaana, waxaad haysaa xog casriyeysan oo ku saabsan kharashyadaada, oo aad si dhaqso leh uga falcelin karto sidaasna aad wax u badbaadin karto. Mar alla markii aad qalabaysid meheraddaada oo dhan oo aad ku xidho xannibaadda, meheraddaadu waxay noqon doontaa mid aan hagaagsanayn oo si wanaagsan loo agaasimay maalgashadayaasha mustaqbalka ee jecel inay iibsadaan astaamahaaga.
Tokenization waa habka loo ilaaliyo xogta xasaasiga ah iyadoo la beddelayo lambar algorithm ah oo loo yaqaan 'token'. Tokenization waxaa badanaa loo isticmaalaa in looga hortago khayaanada kaararka deynta. Astaamahan ayaa ku gudbin kara internetka ama shabakado badan oo wireless ah oo loo baahan yahay si loo fuliyo lacag bixinta iyada oo aan la soo bandhigin faahfaahinta bangiga dhabta ah. Tirada dhabta ah ee xisaabaadka bangiga waxaa lagu hayaa meel aamin ah.
Tokenization waa hab u rogaya xuquuqda hantida astaamo dijitaal ah.
Ka soo qaad inuu jiro guri 200,000 EUR ah. Tokenization waxay u rogi kartaa aqalkan 200,000 astaamo (nambarku gabi ahaanba waa sabab la'aan, markaa waxay noqon kartaa 2 milyan oo tokens). Sidaa darteed, calaamad kasta waxay u taagan tahay 0,0005% hantida aasaasiga ah. Ugu dambeyntiina, waxaan ka soo saari doonnaa calaamadda dusha sare ee taageerta qandaraasyada caqliga badan, sida Ethereum, marka astaamaha waa la iibsan karaa oo lagu iibin karaa si xor ah is-weydaarsiyo kala duwan.
Markaad iibsatid calaamado, waxaad runtii iibsanaysaa 0,0005% hantida hantida. Waxaad iibsaneysaa 100,000 oo tokens oo waxaad leedahay 50% hantidaada. Waxaad iibsaneysaa 200,000 astaamaha waxaadna leedahay 100% hantida. Sida iska cad, ma noqonaysid milkiilaha sharciga ah ee guriga. Si kastaba ha noqotee, maxaa yeelay Blockchain waa buug-hage guud oo aan la beddeli karin, wuxuu hubiyaa in mar alla markii aad iibsato astaamo, cidina 'ma tirtiri karto' hantidaada, xitaa haddii aysan ku jirin diiwaanka dhulka. Waa inay cadahay sababta ay Blockchain u ogolaato adeegan.
Calaamadeynta hantida kale waxay u shaqeysaa si isku mid ah. Haddii uu jiro sawir P 50 milyan oo Picasso ah, sidoo kale waa lagu calaamadeyn karaa. Waxaa la mid ah dahabka iyo dheeman iyo dammaanadaha kale iyo hantida maguurtada ah.
Previous PostPrevious Waa maxay calaamadeynta